ဂဠုန်ဦးစောမျိုးဆက်တွေရဲ့ ခံစားချက် …
July 19, 2019 Thuta Star 0
ဂဠုန်ဦးစောမျိုးဆက်တွေရဲ့ ခံစားချက် ….. အာဇာနည်နေ့ရောက်တိုင်းဂဠုန်ဦးစောမျိုးဆက်တွေ ဘယ်လိုများနေကြမလဲလို့ငယ်ငယ်ထဲကခဏခဏတွေးမိခဲ့ဖူးတယ်။သူတို့မသိလိုက်တဲ့၊သူတို့မမီလိုက်တဲ့သမိုင်း ဆိုးကိုရေးခဲ့တဲ့ဂဠုန်ဦးစောမရှိတော့ပေမဲ့ သမိုင်းတရားခံအဖြစ်သူတို့မျိုးဆက်တွေကိုမြင်နေကြဆဲပါပဲ။ လီလီပန်းလေးများရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ… (ဂဠုန်ဦးစောမိသားစု၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု) ကိုယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စအတွက် ဒီလိုခံစားရတာကို စိတ်မကောင်းဘူး။ ကလေးတွေက ဘာမှလုပ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့အဘိုးကလည်း သူ့အပြစ်အတွက် ဥပဒေအရခံသွားပြီပဲ။ ကျန်တဲ့လူမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ ဒီကလေးတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ […]
ကားဟွန်းသံတွေကြားရတော့ အ​မေနာရီ​လေးကိုငုံ့ ကြည့်​လိုက်​တယ်…
ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ စာရှုသူများခင်ဗျာ ဒီတစ်ခါတင်ပြချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ ဒီကနေ့ အာဇာနည်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား လူကြည့်များနေတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးဟာဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလည်းဖြစ်သူ၊ လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ရဲ့ ကွယ်လွန်သူ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ဆွမ်းကပ်နေတာတွေ့ရပြီး ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာတော့ […]
ရန်ကုန်က TAXI မောင်းသမား ကားငှားစီးတဲ့ ခရီးသည်နဲ့ အတူ KTV ကို လိုက်သွားမိလို့ ဒုက္ခရောက်သွားရတဲ့ အဖြစ်….
ကားငှားစီးတဲ့ ခရီးသည်နဲ့ အတူ KTV ကို လိုက်သွားမိလို့ ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ ရန်ကုန်က Taxi မောင်းသမား ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဖိုးစိန်လမ်းရှိ KTV ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ယာဉ်ငှားရမ်းလာသူ ခရီးသည် အမျိုးသားနှင့်အတူ ကာရာအိုကေ အခန်းထဲ လိုက်ထိုင်သည့် အငှားယာဉ်မောင်းမှာ ၎င်းမောင်းနှင်နေသော ဖီဒါ အငှားယာဉ် ခိုးယူခံရကြောင်း […]
ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဂဠုန်ဦးစော အခြေအတင်စကားများခဲ့ကြပုံ…. (၅) မိနစ်အချိန်လေးပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပါ…
ဂဠုန်ဦးစောဘာလဲ ( သို့ ) ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ဦးစော အခြေအတင်စကားများခဲ့ကြပုံ…. (၅) မိနစ်အချိန်လေးပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပါ😢😢 ဂဠုန်ဦးစောကား နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိကြီး ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကိုချစ်သည့် ၊ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် ။ အာဏာကုလားထိုင် မြင့်မြင့်ကိုသာ တက်ချင်သူဖြစ်၏ ။ သူက ရက်စက်၏ ။ ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်၏ […]
ဇနီးမယားဟာ ဘာကြောင့် လင်ယောက်ျားရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာပဲ အိပ်ခွင့် ရှိတာလဲ
ဘာကြောင့် ဇနီးမယားဟာ လင်ယောက်ျားရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာပဲ အိပ်ခွင့် ရှိတာလဲ မိန်းမက လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်ရင် ယောကျာ်းက ဘုန်းကံ နိမ့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးမှာ စီးပွားရေး လာဒ်ပိတ်စေတယ် ဆိုတာ တကယ်လား ??? လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ် […]
ချစ်ရသူလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲကာ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတဲ့ အဆိုတော်ဇွဲပြည့်
သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲထိဝင်နေရာယူထားတာကတော့ အဆိုတော်ဇွဲပြည့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသံလေးဟာ လူတိုင်းရဲ့နားမှာ နားဝင်ချိုစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့သီချင်းလေးတွေကတော့လူငယ်တွေသာမကလူကြီးတွေပါနားဝင်ချိုစေတာကြောင့်တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်ရတဲ့အဆိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကလည်းလူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာအမြဲရေပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့လက်ရှိမှာသီချင်းသစ်လေးတွေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေလည်းစောင့်မျှော်အားပေးနေကြတာပါ။Showပွဲတွေမှာလည်းပရိသတ်နဲ့အပေးအယူမျှစွာသီဆိုတတ်သူပါ။ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော်ဇွဲပြည့်ကတော့ ဒီနေ့မှာချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် …ဗိုက်ကြီးတာထက် ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် …ဗိုက်ကြီးတာထက် ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ အပျို​ပေါက်​ ညီမ​လေးတို့​ရေ ဗိုက်​မကြီးသွား​ ပေမယ့်​ ဗိုက်​ကြီး သလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ဒီတစ်​ခါ အကိုက​​ ပြောပြချင်​တယ်​ ။ ချစ်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ၊ အ​ပျော်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတူ​နေကြ ပြီးတဲ့​နောက်​ ​နောက်​ဆက်​တွဲ […]
သူ၏ သမီးထံသို့ ဂဠုန်ဦးစောမှ နောက်ဆုံးပေးစာ….
ဂဠုန်ဦးစောမှ သူ၏ သမီးထံသို့ နောက်ဆုံးပေးစာ ချစ်သမီးသို့ ချစ်သမီး အတွက် အနည်းငယ် ရေးရဦးမည်။ သမီးသည် ငယ်စဉ်က စ၍ သူတပါး အသတ်ကို မသတ်ဘဲ အမြဲ ရှောင်ကြဉ်လာခဲ့ သလို၊ မိမိ၏ အသက်ထက်ဆုံး မည်သည့် အခါမှ သူတပါး အသက်ကို မသတ်ပါ […]
ဂဠုန်ဦးစော၏ ဇနီး မှ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် အသက်လျော်ကြေးလာပေးတဲ့အချိန် ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ သမိုင်းဝင် စကား
ဂဠုန်ဦးစောသည် ကြိုးမိန့်ကျပြီးနောက် ကျဆုးံခဲ့ရသောအာဇာနည်ကိုးဦးအား အသက်လျော်ကြေးပေးရန် ၎င်းပိုင် လက်ဝတ်ရတနာများ ကိုရောင်းချ၍ ရရှိငွေကို အညီအမျှခွဲဝေပေးရန် ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်သန်းခင်အား ထောင်းတွင်းမှ မှာကြားခဲ့သည်။ ဒေါ်သန်းခင်သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးစော၏ဆန္ဒအတိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးအားလိုက်လံပေးပြီးနောက် ဒေါ်ခင်ကြည်အား အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး အသက်လျော်ကြေးပေးရသော အခါ ဒေါ်ခင်ကြည်က… “ရှင့်ယောက်ျား ကျမယောက်ျားကို လုပ်ကြံလို့ ကျမမုဆိုးမဘဝရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ […]
ကားတွေကို အမြဲလုယက် နေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ တဦးရဲ့ စေတနာ
ကားတွေကို အမြဲလုယက် နေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ တဦးရဲ့ စေတနာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ဘက်ဒေသမှာ “ကယ်ရီမား”လို့ခေါ်တဲ့ ရွာတစ်ရွာရှိတယ်။ အဲဒီရွာက မြေဟာ ကျတ်တီးမြေ ဖြစ်တာ ကြောင့် ဘာမှစိုက်ပျိုး မဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူး။ ရွာသားတွေဟာ ဆင်းရဲလွန်းလို့ နပ်မှန်အောင် မနည်းကြိုးစားရတယ်။ ရွာနဲ့ […]